Isikhungo Sokuthandwa Kwe-imeyili kanye Namakhasi Okungabhaliswanga: Usebenzisa Izindima vs. Ukushicilelwa | Martech Zone
Isikhungo Sokuthandwa Kwe-imeyili kanye Namakhasi Okungabhaliswanga: Usebenzisa Izindima vs. Ukushicilelwa
NgoLwesibili, Septhemba 29, 2020 NgoLwesibili, Septhemba 29, 2020 Douglas Karr
Ngonyaka odlule, besisebenza nenkampani kazwelonke esakhiweni Ukufuduka nokuqalwa kwamafu kwe-Salesforce and Marketing. Ekuqaleni kokutholakala kwethu, sikhombe izingqinamba ezithile ezibalulekile maqondana nokuncamelayo kwabo - obekususelwa ekusebenzeni kakhulu.
Lapho inkampani yakha umkhankaso, babezodala uhlu lwabemukeli ngaphandle kwesikhulumi sabo sokumaketha nge-imeyili, balayishe uhlu njengohlu olusha, baklame i-imeyili, bese bethumela kulolo hlu. Inkinga yalokhu kwaba ukuthi kuqale izinkinga ezimbalwa:
Ikhasi lokuzikhipha ohlwini bekuyizinkulungwane eziningi zohlu olunamagama wokushicilela angenabo ubungani obhalisiwe abengawaqondi.
Uma umamukeli echofoza ukuzikhipha ohlwini lwe-imeyili, ubakhipha ohlwini kuphela ohlwini olusanda kulayishwa, hhayi ohlotsheni lokuxhumana obhalisile acabanga ukuthi bazikhipha ohlwini lwalo. Lokho kungumuzwa okhungathekisayo kwababhalisile bakho uma beqhubeka nokuthola amanye ama-imeyili alolo hlobo.
Ngezinhlu eziningi kangaka ekhasini lokuzikhipha ohlwini, abamukeli bangakhetha ukungena ku- master zikhiphe ohlwini esikhundleni se uhlobo zokuxhumana. Ngakho-ke, ulahlekelwa ababhalisile okungenzeka babambekile uma ungazange ubakhungathekise ngokuncamelayo okwakhelwe imisebenzi yakho kunokuba kube yisisusa sabo nezinto abazithandayo.
Ukuhlela Umhlinzeki Wakho We-imeyili
Ngenkathi abahlinzeki bezinsizakalo ze-CRM nabama-imeyili bethuthukile benikeza ithuba lokwakha nokuklama izikhungo ezikhethwayo ezingokwezifiso ezinokuhlangenwe nakho okumangazayo… izinsizakalo ezincane zizovele zisebenzise uhlu ukuhlela ikhasi lezintandokazi zababhalisile noma ikhasi lokuzikhipha ohlwini.
Uma ungakwazi ukuklama ikhasi lakho lokuncamelayo, dala ifayela lakho le- izinhlu ngokombono wobhalisile ngu uhlobo yokuxhumana oyithumelayo. Uhlu kungaba ukunikezwa, ukumela, izindaba, amathiphu namasu, ukuthi kwenziwa kanjani, izexwayiso, ukusekelwa, njll. Ngale ndlela, uma obhalisile engafuni ukuthola okunikezwayo okuningi - basengaba ubhalisile kwezinye izindawo onentshisekelo kuzo ngenkathi ukuzikhipha ohlwini ngokwabo ngokuqondile ohlwini lokunikezwayo.
Ngamanye amagama, sebenzisa izici zepulatifomu ye-imeyili ngokufanele:
Izinhlu - zihloko ngezihloko futhi zinikeza obhalisile ukuthi azikhiphe ohlwini lwezinhlobo ezithile zokuxhumana. Isibonelo: Izipesheli
Izigaba - yizicucu ezihlungiwe zohlu ongafuna ukuzisebenzisela ukukhomba okuthuthukile. Isibonelo: Amakhasimende aphezulu ayi-100
Imikhankaso - kuthunyelwa uqobo engxenyeni eyodwa noma eziningi kanye / noma kuhlu. Isibonelo: Ukunikezwa Kokubonga Kumakhasimende Aphezulu
Ngamanye amagama, uma bengifisa ukuthumela isipho kubantu abasebenzise imali engaphezu kwama- $ 100 kungxenyekazi yami ye-ecommerce kulo nyaka, ngizo:
Engeza inkambu yedatha, 2020_Ichithiwe, ohlwini lwami lwe-Offers.
Ngenisa imali esetshenziswe yilowo nalowo obhalisile kungxenyekazi yakho ye-imeyili.
Dala ingxenye, Uchithe ngaphezulu kuka-100 ngo-2020.
Dala imiyalezo yami yokunikezwa ibe yifayela le- umkhankaso.
Thumela umkhankaso wami kokunye ingxenye.
Manje, uma oxhumana naye efisa ukuzikhipha ohlwini, bazokhishwa ohlwini lwe- Uhlu Lokunikezwayo… Kanye nokusebenza esifisa ukuba nakho.
Ukwakha Isikhungo Sokuncamela Esisekelwe Endimeni
Uma ukwazi ukuklama nokwakha isikhungo sakho sokukhetha esihlanganisiwe esinikeza isipiliyoni esihle:
Khomba ifayela le- izindima nezisusa yababhalisile bakho bese wakha lawo mafulegi noma okukhethiwe ku- ukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimende ipulatifomu. Kufanele kube nokuqondanisa nama-personas ngaphakathi kwenhlangano yakho.
Dizayina a ikhasi lokukhetha lokho okwenzelwe umuntu obhalisile kuye ngezinzuzo nokulindelwe okungena kulesosihloko noma kwendawo oyithandayo. Hlanganisa ikhasi lakho lokuthandayo ne-CRM yakho ukuze ube nokubuka okungu-360-degree kwezintshisekelo zekhasimende lakho.
Buza obhalisile kangakanani bafisa ukudluliselwa kubo. Ungasebenzisa izinketho zemvamisa zansuku zonke, zamasonto onke, zeviki ezimbili, nezekota ukwenza ngcono ukugcinwa kohlu lwakho futhi uvikele ababhalisile ukucasulwa ukuthi bathola imiyalezo eminingi kakhulu.
Hlanganisa i- ipulatifomu yezentengiso ukuze lezo zihloko zenzelwe izinhlu ezithile ongazihlukanisa futhi uzithumele imikhankaso, ngenkathi ulawula kangcono oxhumana nabo futhi uvumelanisa amamethrikhi nokugqugquzela kobhalisile.
Qinisekisa ukuthi unayo idatha izinto ezihlanganiswe ne-CRM yakho futhi zivumelanisiwe kungxenyekazi yakho yokumaketha ukudala, ukwenza ngezifiso, nokuthumela okuqondisiwe izingxenye ngaphakathi kohlu lwakho.
Nikeza i master zikhiphe ohlwini ezingeni le-akhawunti uma kwenzeka obhalisile efisa ukuphuma kukho konke ukuxhumana okuhlobene nokuthengisa.
Faka isitatimende sokuthi umamukeli usazothunyelwa okwenziwayo ukuxhumana (isiqinisekiso sokuthenga, ukuqinisekiswa kokuthumela, njll.).
Faka i Inqubomgomo yobumfihlo kanye neminye imininingwane yokusebenzisa idatha ekhasini lakho lokuncamelayo.
Faka okungeziwe iziteshi zokuxhumana, njengezithangami zomphakathi, izexwayiso ze-SMS, kanye namakhasi ezinkundla zokuxhumana azolandelwa.
Ngokuhlela nokusebenzisa uhlu, izingxenye, nemikhankaso ngokufanele, ngeke ugcine kuphela isikhombimsebenzisi somhlinzeki wesevisi yakho ye-imeyili sihlanzekile futhi sihlelekile, futhi ungathuthukisa kakhulu umuzwa wamakhasimende wababhalisile bakho.
Tags: ImikhankasoCRMamamethrikhi we-imeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliIzinhluifu lokumakethasalesforceikhasi lokubhaliselwe
IHopin: Indawo ebonakalayo yokushayela ukuzibandakanya emicimbini yakho eku-inthanethi